विद्यार्थी धेरै भएर पढाउन गार्‍ह्रो भएका उदाहरण थुप्रै पाइन्छन्, तर विद्यार्थी थोरै भएर पढाउन असजिलो भएको छ, डेढगाऊँ ४ को बालहित प्रा.वी .मा । बालहित प्रा.वि. मा तीन शिक्षक कार्यरत छन्, तर विद्यार्थी भने जम्मा एघार जना मात्र ।
यस विद्यालयमा यसपटक कक्षा एक र दुइमा तीन-तीन जना र कक्षा-तीनमा २ जना तथा बाल शिक्षा कार्यक्रममा तीन जना विद्यार्थी मात्र भर्ना भएकाछन् । तर, विद्यार्थी थोरै भएकाले सबै विद्यार्थीलाई एउटै कोठामा राखेर पढाउने गरिएको शिक्षकहरु बताउँछन् ।
जापानी सहयोगी संस्था जाइकाले २०५६ सालमा बनाइदिएको दुइ कोठे पक्की भवन र स्थानीय अभिभावकहरुले जनश्रमदानबाट बनाएको दुइ कोठा गरी विद्यालयमा चार वटा कोठा भए पनि विद्यार्थी नहुँदा ती कोठा खालि छन् ।
विद्यार्थी थोरै भर्ना भएकाले अब ११ जना विद्यार्थी पढाएर बस्न नसकिने भन्दै बालहीत प्रावीलाई अन्यत्र लगेर गाभ्नु पर्ने प्रधानाध्यापक भूपराज पोख्रेलले बताउनुभयो । उता स्थानीय अभिभावक जीतबहादुर सारुले भने विद्यालय सार्ने कुराको विरोध गर्दै विद्यालय राम्रो सँग संचालन गरेमा विद्यार्थी थपिनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । अभिभावकहरुले प्राधानाध्यापक पोख्रेलले अत्याधिक मादक पदार्थ सेवन गर्ने र विद्यालयमा ध्यान नदिने गरेका कारण पनि विद्यार्थीहरु सो विद्यालयमा भर्ना नगरिएको बताएका छन् ।
पोख्रलले पनि आफू विद्यालयमा अनियमित हुने गरेको र आफू मादक पदार्थको लतमा लागेको स्विकार गर्नुभयो । प्रधानाध्यापक पोख्रेल यस अगाडीको शैक्षिक सत्रमा पनि विना जानकारी ८ महिनासम्म विद्यालयमा सर्म्पर्क नगरी अन्यत्र गएका थिए ।
काली टाइम्स संवाददाता,
नवलपरासी क्षेत्र नम्बर दुइबाट संविधान सभा सदस्यमा विजयी नेपाली काँग्रेसका महेन्द्रध्वज जी. सीले पार्टीले घोषणापत्र अनुसार देशलाई गणतन्त्र बनाउन आफ्नो तर्फाट पहल गर्ने बताउनुभएको छ ।
विजयी भएपछि संविधान सभामा भाग लिन काठमाडौं आइपुग्नुभएका जी सीले देशभित्रै विभिन्न अधिकारसम्पन्न राज्यको स्थापना हुने संघीय व्यवस्था गर्ने संविधान बनाउन आफ्नो योगदान रहने बताउनुभयो ।
बालाजु स्थित आफ्नो निवासमा काली टाइम्ससँग भएको वार्तामा जीसीले आफूलाई निर्वाचित गराउने क्षेत्रका बासीन्दाको जीवनस्तर उकास्न आफ्ना तर्फाट सक्दो प्रयास गर्ने वचनवद्धता पनि प्रकट गर्नुभयो ।
गत चैत २८ गते भएको मतदानमा नवलपरासी क्षेत्र नम्बर दुइमा खसेको मत मध्ये १२ हजार १ सय ६६ मत पाई जि सी विजयी हुनुभएको थियो । उहाँले आफ्ना निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेका जीवन श्रेष्ठले भन्दा ३ सय ९७ मत बढी पाउनुभएको थियो ।देशका विभिन्न स्थानमा संविधान सभा मतदानमा धाँधली भएको चर्चा चले पनि डेढगाउँ, मिथुकरम, रकुवा, रुचाङमा भने त्यस्तो कुनै अप्रीय घटना भएको जानकारी आएको छैन । (संविधान सभा सदस्य जि. सी. सँगको अन्तरवार्ता पनि छ।)
काली गण्डकी र बौङ्दी खोलामा अब विष प्रयोग गरेर माछा मार्न नपाइने भएको छ । खोला नदीमा विष प्रयोग गरी माछा मार्दा पानीमा बस्ने सबै जचलर र विष प्रयोग गरिएको माछा खाने मानिसलाई समेत असर पर्ने भएकाले प्रहरीले खोला नदीमा विष हाली माछा मार्न प्रतिवन्ध लगाएको हो ।
डेढगाँउ वरपरका खोला नदीमा विगत २० वर्षअगाडि देखि नै विष हालेर माछा मार्ने गरिएको थियो । डेढगाँउ इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरिक्षक देववहादुर वस्तीले खोला र नदीमा विषादी प्रयोग गरी माछा मार्ने काम त्रि्र भएको कारण आजभोलि खोला र नदीमा प्रहरी गस्ति समेत गर्न थालिएको जानकारी दिनुभयो ।
नियम विपरित यसरी विष प्रयोग गरेर माछा मारेको भेटिएमा नियम अनुसार कारवाही गरिने कुरा निरिक्षक वस्तीले द काली टाइम्सलाई बताउनुभयो । प्रहरीले विषादी प्रयोगमा निगरानी गरिरहे पनि मानिसलेहरुले लोकीचोरी विषादी प्रयोग गरी माछा मारिरहेका छन् ।
डेढगाउँ गाविसले पाएको १० लाख रुपैया मध्ये डेढगाउँ ३ र ४ वडामा वाटो निर्माणका लागि छुट्टयाइएको रकम सदुपयोग नभएको गुनासो स्थानीय वासिन्दाले गरेका छन् ।
गाउँ विकास समितिको गत वर्षबसेको र्सवदलीय वैठकले डेढगाउँ गाविसको ३ नम्बर वडामा चार हजार रुपैया र ४ नम्बर वडामा छ हजार रुपैया बाटो निर्माणका लागि छुट्टयाएको थियो ।
सो रकम वडा नम्बर ४ का फत्तबहादुर स्वती र वडा नम्बर ३ मा शिवबहादर वि.क ले जिम्मा दिइएको थियो । बाटो निर्माणमा भएको ढिलाई सम्वन्धमा उहाँहरुलाई जिज्ञासा राख्दा रकम अपुग भएका कारण बाटो निर्माण हुन नसकेको बताउनुभयो । अर्को र्सवदलीय बैठकमा थप रकम माग गरी वर्षा अगाडि नै बाटो निर्माण गरिने उहाँहरुले बताउनुभयो । बाटो निर्माण नगरे वर्षामा आउने पानीले थप क्षति पुर्‍याउने स्थानीय बासीन्दाहरुले बताए ।
काली टाइम्स सम्वाददाता, भारतीपुर
तम्सारिया फाउण्डेसन अफ निदरलैण्ड र कुमारी प्राथमिक विद्यालय हसौराको आर्थिक सहयोगबाट खजुरीमा कामधेनु प्रा.वि. मा पाँच वटा पक्कि कोठा बनेका छन् । कुमारी प्रा.वि. हसौराका प्रधानाध्यापक फर्सुम शर्माले गत माघ १८ गते विद्यालयमा थप पक्कि कोठा बनाउने कामको शिलान्यास गर्नुभएको थियो ।
विद्यालय भवन निर्माणमा स्थानीय जनश्रमदानको पनि उल्लेख्य भूमिका रहेको विद्यालयका प्र.अ. रामचन्द्र लामिछानेले बताउनुभयो ।
रकुवा र तनहुँको घिरिङ सुन्धारा जोड्ने साँघुरीघाटमा झोलुङ्गे पुल निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । गत मंसिर देखि पुल निर्माण सुरु भएको र यस वर्षो वर्षा अगाडि नै पुल निर्माण कार्य सम्पन्न भइसक्ने स्थानीय कुलमणी ढुंगानाले बताउनुभयो ।
मिथुकरम, डेढगाउ र रकुवाबाट काठमाडौं आई बसोबास गरिरहेकाहरुको साझा थलो नवलपरासी बुङ्दी काली विकास मञ्च, काठमाडौंको तेस्रो साधारण सभा यही फागुन १८ गते काठमाडौंको थानकोटमा वनभोज कार्यक्रम सहित सम्पन्न भयो ।
साधारण सभाले रकुवाका श्रीलाल ठाडाको अध्यक्षमा १३ सदस्यीय समिति बनाएको छ । समितिका उपाध्यक्षमा मिथुकरमका बाबुराम अधिकारी, सचिवमा रकुवाका कुलमणी ढुंगाना, सह सचिवमा डेढगाउकी झलमाया वि.क. र कोषाध्यक्षमा डेढगाउकै सुदर्शन श्रेष्ठ निर्वाचित हुनुभएको छ ।
यस्तै सदस्यहरुमा मिथुकरंका गोविन्द लामिछाने, विष्णु गदाल र मेघसरा वि.क. रकुवाका सुन्दर पाण्डे, युवराज थापा र कान्ति थापा तथा डेढगाउका घनराज ओझा, धनबहादुर वि.क.हुनुहुन्छ ।
यस्तै मञ्चको कानूनी सल्लाहकारमा चण्डीप्रसाद अधिकारीको चयन भएको छ । कार्यक्रममा निवर्तमान सचिव सुदर्शन श्रेष्ठले गत वर्षमञ्चले ७६ हजार रुपैया आम्दानी गरेकोमा ३८ हजार रुपैया खर्च भएको आर्थिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा विदेशी पाहुना बेल्जीयमका निक मेननले आफ्नो तर्फबाट समितिलाई सधै सहयोग रहने बताउनुभए थियो । कार्यक्रममा दोहोरी गायकहरुले मनोरञ्जन थपेका थिए ।
मिथकुरम गाविसको मंचेडीमा रहेको धर्मात्मा मा.वी को तीन तिरबाट पहिरो जान थाले पछि शिक्षक, विद्यँर्थीमा त्रास बढेको छ । गत भदौमा आएको बाढीले विद्यालयको केही भाग बगाइसकेकोमा अब आउने वर्षामा बाढी आए विद्यालय भवन नै खतरामा पर्न सक्ने प्रधानाध्यापक कृष्णप्रसाद लामिछानेले बताउनुभयो ।
विद्यालय हाता भित्रको घा“स र सिसौका रुख गत वर्षो पहिरोले नै बगाएको थियो । जाली भरेर र बास रोपेर विद्यालयलाई सुरक्षित पार्न गरिएको उपाय प्रयाप्त नभएको प्रधानाध्यापक लामिछानेले जानकारी दिनुभयो । लामिछानेका अनुसार, जिल्ला शिक्षा कार्यलय तथा गाविसको स्थानीय स्रोतबाट रकम माग गरी भवन अन्यत्र सार्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । धर्मात्मा मा. वि. मिथुकरम, भारतिपुर, जौवारीका साथै तनहु“को करुवाटार, बटौलीटारका विद्यार्थीहरु अध्ययन गर्ने थलो हो ।
गोविन्द सहेली लामिछाने
मिथुकरम गाविसले यस वर्षसरकारले उपलब्ध गराएको दश लाख रुपैया अनुदान मध्ये एक लाख पचास हजार रुपैया दलित, महिला, जनजाति बालबालिका अपाङ्गका लागि छुट्टयाएको थियो । तर सो रकम मध्ये दलितलाई पा“च हजार रुपैया उपलब्ध गराइए पनि अन्य रकमको हिसाब किताब र्छलङ्ग हुन नसकेको आरोप स्थानीय बासिन्दाले लगाएका छन् ।
गाविसले एक लाख पचास हजार रुपैया मध्ये बालबालिका हितका लागि भनेर २० हजार रुपैया छुट्टयाएको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि गाविस सचिव हरीनारायण आचार्यले पैसा नदिएको गुनासो दिगो बालविकास समुहका अध्यक्ष अर्जुन नेपालीले गर्नुभयो ।
स्थानीय समाजसेवी डोलराज कडेलका अनुसार गत असोज महिनामा सचिव आचार्यसग यस सम्वन्धमा छलफल गर्दा सचिव आचार्यले मंसिर भित्र सो रकम बालबालिकालाई उपलब्ध गराउने बताउनुभएको थियो ।
सचिवले रकम नदिएको गुनासो बालबालिकाले स्थानीय समाजसेवी र विद्यालय प्रधानाध्यापक मार्फ जिल्लामा स्थानीय विकास अधिकारी समक्ष पनि पुर्‍याएका छन् ।
बुलीङ र अर्खलाको सिमानामा रहेको देवसत खोलामा २१ किलोवाटको लघु जलविद्युत परियोजना बन्ने भएपछि बुलीङटार बासीले विद्युतको उपभोग गर्न पाउने भएका छन् । "इसाप" नाम गरेको गैर सरकारी संस्थाले सत्र लाख पचासी हजार रुपैया अनुदान सहयोग दिएपछि देवसत खोलाबाट जलविद्युत निकाल्न लागिएको हो ।
४७ लाख रुपैया खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको उक्त परियोजनाको लागि सांसद दामोदर बस्ताकोटीले संसदकोषबाट पचास हजार रुपैया उपलब्ध गराएको परियोजनाका सचिव सन्तबहादुर कुमालले बताउनुभयो ।
परियोजना निर्माणको ठेक्का पाएको थापा इन्जिनिएरीङ बुटवललाई निर्माण सामाग्री ढुवानी वापत तिनलाख पचास हजार रुपैया बुझाइसकेको कुमालले जानकारी दिनुभयो ।
२१ किलोवाट विद्युत मध्ये दुइ किलोवाट स्वास्थ्य कार्यालयलाई र वाँकी १९ किलोवाट विजुली बुलीङटार गाविसका वडा नम्बर १, २ र ५ का करिब दुइ सय ७५ घरधुरीलाई वितरण गर्ने योजना रहेकोछ । यसबाट दुइ हजार भन्दा धेरै बुलीङबासीले फाइदा लिन सक्ने तथा साना व्यवसायीक उद्योग पनि संचालन हुन सक्ने स्थानीय व्यवसायी भोला गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
देवसत खोलामा वाँध हाली करिव ५ किलोमिटर लामो नहरबाट खसुवा खोला छेउमा पावरहाउस वनाई विद्युत निकाल्ने र त्यहाँबाट निस्कने पानीले करिव ३ हेक्टर खेत समेत सिंचाई हुने छ ।
स्थिति सहज भयो भने अर्को हिउँद सम्म विजुली निस्कने तथा भविष्यमा पानीघट्टा पनि त्यसैबाट चलाउने योजना रहेको सचिव कुमालले बताउनुभयो ।
वुलिङटारमा पाँच किलोवाट क्षमताको अर्को लघु जलविद्युत परियोजना तीन वर्षअगाडि देखि नै संचालन हुँदै आए पनि गत भदौमा आएको वाढीले क्षति पुर्‍याएपछि उक्त परियोजना बन्द भएको छ ।
तम्सरिया फाउण्डेसन अफ नेदरलैण्ड र कुमारी हसौराले भारतीपुर गाविसको खजुरी स्थित कामधेनु प्राथमिक विद्यालयमा यही फागुन १७ गते एक दिने स्वस्थ्य शिविर संचालन गरे ।
शिविरमा भारतीपुर, मिथुमरम, डेढगाउँ र तनहुँ राम्जाकोट गा.वि.स.का र्सवसाधारणहरुको उपस्थिति थियो । निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण र औषधी वितरण समेत गरिएको स्वस्थ्य शिविरबाट दुइ सय जना भन्दा धेरैले फाइदा लिएको विद्यालयका शिक्षक हरिकृष्ण कडेलले जानकारी दिनुभयो ।
फेदी केरमटारका किसान दाजुभाइ शिवप्रसाद, केशवप्रसाद र कृष्णप्रसाद पाण्डेले गरेको लोभलाग्दो तरकारी खेतिको चर्चा आजभोलि गाउँमा निकै छ । पाँच वर्षदेखी ६ रोपनी जग्गामा विऊ, बेर्ना र तरकारी खे आएका पाण्डे दाजुभाइले त्यसैबाट वर्षरीको घर खर्च आम्दानी गर्छन् ।
मौसमी तथा बेमौसमी दुवै किसिमका तरकारी उत्पादन गर्ने किसान दाजुभाइले उब्जाएका तरकारी गाउँमा नै विक्रि हुन्छ । तरकारी खेतिबाट उत्साहित पाण्डे दाजुभाइ अझै खेती विस्तार गर्ने तयारी पनि छन् ।
"तरकारीको लागी धेरै पानी चाहिन्छ तर यहाँ सिंचाइको लागी पानीको अभाव छ, पानी गाग्रीमा ल्याएर हाल्नु पर्छ" किसान शिव प्रसाद पाण्डेले भन्नुभयो "गाउँमा जे.टि.ए. पनि छ भन्छन् तर आज सम्म देख्न पाइएको छैन ।"
जे.टि.ए.सँग सरसल्लाह गरी विउविजन ल्याउन पाए तथा रोग लागेको अवस्थामा बेलैमा औषधि हाल्न पाए उत्पादन बढ्ने किसान कृष्णप्रसादले बताउनुभयो । दुःख गरेर तयार पारेको बालीलाई कुखुरा र चोरले दुःख दिने गरेको पनि पाण्डे दाजुभाइको गुनासो छ ।
यसैगरी मंचेडी -१ माथ्ल्ला डिहीका किसान कुलप्रसाद कंडेलले पनि तरकारी खेतीबाटै वर्षभरिलाई खर्च पुर्‍याउनुहुन्छ । चार वर्षदेखि तरकारी खेती गर्दै आएका कंडेललाई सुरु सुरुमा गाउँलेले बारीको तरकारी मागेर हैरान पारेका थिए ।
तर आजभोलि मागेर खाने चलन कम भइसके पनि बेच्नका लागि घरघरमा पुग्नुपर्ने उहाँको भनाईछ । दुइछाक खान गाह्रो छ भन्दै हिड्ने व्यक्तिलाई तरकारी खेती गर्ने सल्लाह कंडेलले दिदैं आउनुभएको छ ।
नहरका उपभोक्ताको फागुनमा भएको भेलाले डेढगाउँमा नयाँ सिंचाइ उपभोक्ता समितिको गठन गरेको छ । कार्य समिति गठन हुनासाथ जीण अवस्थामा रहेको नहरको निर्माण कार्य पनि सुरु गरिएको छ । नवनिर्वाचित कार्यसमितिका अध्यक्ष कमानजीत दर्राईले जेठसम्ममा नहरमा पानी ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
दर्राईको अध्यक्षतामा बनेको कार्यसमितिको उपाध्यक्षमा कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ, सचिवमा नारायणप्रसाद ओझा, सहसचिवमा डोलराज खत्री र कोषाध्यक्षमा कमल दर्राई चयन हुनुभएकोछ ।
नहर पुननिर्माणका लागि लाग्ने करिब ३१ लाख रुपैया जिल्ला सिंचाइ कार्यालयसँग माग गरिए पनि त्यसमा प्रगति नभएको भन्दै समितिले उपभोक्ताबाट श्रमदान र रोपनीको हिसावले रकम उर्ठाई नहर बनाउने योजना बनाएको समितिका सचिव ओझाले जानकारी दिनुभयो ।
गत भदौमा आएको बाढीका कारण नहर पहिरो गए पछि डेढगाउँ फाँटको करिव २४० हेक्टर खेतीयोग्य जमीन सुख्खा रहँदै आएको छ । धान पाक्ने बेलामा नहर भत्किएपछि धेरै किसानले यस वर्षपरालमा मात्रै चित्त बुझाउनु परेको थियो भने गहुँको खेती पनि राम्रो हुन सकेन ।
गरे के हुन्न र - यसको उदाहरण बन्नुभएको छ, रकुवा-१, वाँझोवारीका कृषक हिराबहादुर सुनार । फालिएको जग्गामा ८ वर्षअगाडि कफी लगाएका सुनारले ६ वर्षयता कफी खेतिबाट वाषिर्क तीस हजार रुपंया सम्म आम्दानी गरिरनुभएको छ ।
वाँझोबारीको आफ्नो २ रोपनी बारीमा सीसौ रोपेको सुनारले सीसौ बारी भित्रको खाली जग्गामा करिव चार सय वटा कफीको विरुवा लगाउनु भएको थियो ।
दुइ वर्षपछि कफीले फल दिन थाले पछि सुनारले पाखो जमिनबाट पनि आम्दानी गर्न थाल्नुभएको हो । कफीको एउटा बोट बाट तीन, चार कीलो सम्म फल दिने सुनारले जानकारी दिनुभयो ।
उत्पादन भइसकेपछि कफी बेच्न पोखरानै पुर्‍याउनु परेकोमा भने सुनारले गुनासो पोख्नुभयो । गाउँमा अरुहरुलाई पनि कफी खेति तर्फआकषिर्त हुन अनुरोध गर्दै हिड्ने सुनारले गाउँमा जेटी.ए भइदिए कफी खेति अझ फस्टाउन सक्ने बताउनुभयो । यस भेगमा कफी खेतिको राम्रो उत्पादन हुने भएकाले वेरोजगार युवाका लागी कफी खेती उत्कृष्ट र आकर्ष हुने सुनारको धारणा छ ।
विगतमा दुइ दुइ पटक मिति घोषणा भएर पनि हुन नसकेको संविधान सभा निर्वाचन यसपटक चैत २८ गते हुने भएपछि अन्यत्र झैं डेढगाउँमा पनि चुनावको लहर छाएको छ । जनताले चुनेका प्रतिनिधिरुले संविधान बनाउनका लागि हुन लागेको संविधान सभा निर्वाचनमा यसपटक नवलपरासी क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचन तर्फ १३ जना उम्मेदवार छन् ।
डेढगाउ, रकुवा मिथुकरम सहितका गाविस पहिले नवलपरासीको क्षेत्र नम्बर एकमा रहे पनि क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन पछि अहिले यी गाविस नवलपरासीको क्षेत्र नम्बर दुइमा परेका छन् । नवलपरासी जिल्लामा विगतमा चार वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेकोमा अहिले ६ वटा निर्वाचन क्षेत्र छ ।
गाउँमा चुनावको लहर ल्याउन अरु दल भन्दा नेकपा माओवादी अगाडि देखिएका छन् । माओवादीले चुनावी सभा पनि गरिसकेका छन् । संविधान सभालाई निष्पक्ष गराउन चुनावी आचार संहितामा भित्ते लेखन गर्न नपाइने भनिए पनि डेढगाउँ र यस वरपर माओवादीले भित्ते लेखन गरेका छन् ।
नेकपा एमालेले पनि आँफ्नो सांस्कृतिक टोली सहित गाउँगाउँमा प्रचारका लागि हिडेका छन् भने डेढगाउँ लगायतका गाविसमा प्रचार प्रसार समिति बनाइसकेका छन् । उता, डेढगाउँ सहित तत्कालिन क्षेत्र नम्बर एकका पूव सांसद महेन्द्रध्वज जी. सी. पनि नेपाली काँग्रेसको प्रचारका लागि गाउँ गाउँमा हिडिरहेका छन् ।
काँग्रेस, एमाले र माओवादी चुनाव प्रचारमा अगाडि देखिए पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सहितका अन्य दलका नेता कार्यकर्ता पनि प्रचारका लागि गाउँमा आइरहेका छन् ।
यसपटक चुनावमा विगतमा भन्दा फरक दुइवटा मतपत्रमा छाप हान्नु पर्दछ । प्रत्यक्षका लागि यिनै उम्मेदवार मध्ये एक जना छान्नु पर्दछ भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालिका लागि निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएका ५५ वटा दलमध्ये कुनै एउटालाई भोट दिनुपर्दछ ।